सफल बन्न चाहनुहुन्छ ? यी हुन् सफलता प्राप्त गर्ने ५ महत्वपूर्ण सुत्रहरु « Bagmati Online
सफल बन्न चाहनुहुन्छ ? यी हुन् सफलता प्राप्त गर्ने ५ महत्वपूर्ण सुत्रहरु
हामी तपाइँहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ । प्रेरक भनाईहरु, मनछुने लाईनहरु र साथ् साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ । आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ । आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ । जीवन बाँच्नका लागि रोटी, कपडा र घर आवश्यक हुन्छ तर एउटा अर्को कुरा पनि जरूरी हुन्छ । के होला त्यो ? सफलता नै त्यो आवश्यक चीज हो जसले जीवनलाई पूर्णता दिन्छ । तपाईं सफल भएर नै आफ्नो फरक लक्ष्य बनाउन सक्नुहुन्छ। संसारमा दुईथरी मानिस छन् : सफल र असफल । सफल मानिसले के गरेर लगातार सफलता हासिल गरेका हुन् अनि असफल मानिसले कुन गल्ती बारम्बार दोहो–याएर असफल भइरहेका हुन् ? तपाईं पनि सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । के हुन् ती कुरा ?
प्रत्येक व्यक्तिले गल्ती गर्छ तर विवेकशील मानिसले गल्ती दोहो–याउँदैन । सफल हुनका लागि गल्तीबाट सिकेर अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै समयको भरपूर सदुपयोग गर्ने, सफल मानिसको संगत गर्ने, सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने, आफूमाथि विश्वास गर्ने मानिस पनि सफल हुन्छन् ।